အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အကျဉ်းထောင်တစ်ခု ကို တွေ့ရစဉ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမားတြားကျွန်းက ဘီလာဝီဆိပ်ကမ်း အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာအုပ်စုက ထောင်တွင်းအုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်တာကြောင့် ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ အေအက်ဖ်ပီသတင်းမှာ ဒီနေ့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
မိတ္တီလာမြို့က အကြမ်းဖက်မှု၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဓါတ်ပုံတွေကို ထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့ မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေက ကြည့်ရှုရပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အုပ်စုနဲ့ တိုက်ခိုက်တာလို့ အင်ဒိုနီးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကိုးကားပြီး အေအက်ဖ်ပီက ရေးသားခဲ့တာပါ။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမားတြားကျွန်းဖက်ကို မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ဖက်က မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေ လှေတွေနဲ့ရောက်ရှိရာမှာ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကဖမ်းဆီးပြီး ဘီလာဝမ်ဆိပ်ကမ်းက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ အလားတူ အင်ဒိုနီးရှားရေပိုင်နက်ထဲ ငါးခိုးဖမ်းမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း အဲဒီလဝက အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထိမ်းသိန်းထားတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ငါးခိုးဖမ်းမှုနဲ့ ထိမ်းသိန်းခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတော့ လာမယ့်မေလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ဖို့ စီစဉ်ထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။
မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာတွေက ထောင်တွင်းကုတင်တိုင်တွေကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုပြီး အုပ်စုနဲ့ရိုက်နှက်ရာမှာ ၈ ဦးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့တွေက ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းရောက်ရှိရာမှာ သေဆုံးနေပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာ တစ်ရာကျော်ကို အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးနေသလို မျက်မြင်သက်သေ ၃ဝ ကိုလည်း စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။
လုံခြုံရေးနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရိုဟင်ဂျာတွေ လိုလား
တူရကီ သမ္မတဇနီး ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်း ရှင်းလင်း
I DON.T UNDERSTAND. DAW aung san su kyi ko myanmar people tway chit myat noee ya mal
Apr 09, 2013 03:20 AM
နေရပ်- Somewhere From Myanmar
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တရားခံတွေကို ဖမ်းပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ၈ယောက်တောင်အသက်ခံရတာကို အစောင့်တွေကမသိဘူးလား။ အံသြစရာပဲ......
Apr 08, 2013 12:33 PM
မြန်မာ နိုင်ငံသား အချင်းဒချင်း စကားများပြီးရန်ဖြစ်တာလေ။ဘာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ဒီ လိုမလုပ်သင်.ဘူး။ ဒါပေမဲ. မွတ်စလင် များ ခံ စားနေရတာ ကိုနည်းနည်း နားလည်လာ လိ် မည်လို. ထင်ပါတယ်။ ခက်တာက မီဒီယာများက မီင်္ဒ ယာ မပီသဘူး။ အမျိုးသားရေး လုပ်ချင်၇င်မီဒီယာ မလုပ်နဲ.။
Apr 07, 2013 11:50 PM
daw aung san su kyi,min ko naing,moe thee zun must know about that news.
Apr 07, 2013 11:33 PM